धूम्रपानबारे बाइबल के भन्छ?
आवरण लेख विश्वव्यापी महामारी
आवरण लेख धूम्रपानलाई ईश्वर कुन दृष्टिले हेर्नुहुन्छ?
तपाईंले जीवन दिने रोटी चाख्नुभएको छ?
मरिसकेका हाम्रा पुर्खाहरूको लागि के आशा छ?
सोह्रौं शताब्दीका सत्य खोज्ने तीन व्यक्ति—तिनीहरूले के पत्ता लगाए?
के ईश्‍वरले हामीलाई दुःखकष्ट दिनुहुन्छ?
प्रहरीधरहरा | जून २०१४
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उज्बेक उन्डुबेली उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओसेसियन कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्यामा क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डाँग्मे डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्गोलियन मराठी मल्यालम माया मालागासी माल्टिज मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वायुनाइकी शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
आवरण लेख | धूम्रपानप्रति ईश्वरको दृष्टिकोण
अघिल्लो लेखमा उल्लेख गरिएका नाओकोले आफूले धूम्रपान छोड्न सकेको कारणबारे यसो भनिन्‌: “ईश्वरका गुणहरू अनि उहाँको उद्देश्यबारे सिकेकोले मैले कुलत छोड्न सकें।” तिनले ती कुराहरू बाइबलबाट सिकेकी थिइन्‌। हुन त सुर्तीजन्य पदार्थको विषयमा बाइबलले केही बताएको छैन तर धूम्रपानलाई * ईश्वर कुन दृष्टिले हेर्नुहुन्छ भनेर चाहिं बुझ्न मदत गर्छ। बाइबलको यस्तो शिक्षाले थुप्रैलाई कुलत छोड्न र त्यससित लड्न चाहिने आत्मबल दिएको छ। (२ तिमोथी ३:१६, १७) आउनुहोस्, धूम्रपानका तीनवटा हानिकारक असरबारे विचार गरौं अनि यसबारे बाइबलको दृष्टिकोण पनि जाँचौं।
धूम्रपानले लत बसाउँछ
सुर्तीजन्य पदार्थमा निकोटिन भनिने नसालु पदार्थ हुन्छ। यसले मान्छेलाई उत्तेजित अनि सुस्त बनाउँछ। धूम्रपान गर्दा निकोटिन तुरुन्तै मस्तिष्कमा पुग्छ। चुरोटको एक सर्कोमा एक डोज निकोटिन हुन्छ। त्यसको मतलब दिनमा एक बट्टा चुरोट खानेले लगभग २०० डोज निकोटिन लिइरहेको हुन्छ। निकोटिनको यो मात्रा अरू लागूपदार्थमा पाइने मात्राभन्दा धेरै हो। यसरी निकोटिनको नियमित प्रयोगले लत बस्छ। लत बसिसकेको व्यक्तिले निकोटिनको तलतल मेटाउन नसक्दा रिस उठ्ने, निराश हुने, निद्रा नलाग्ने, छटपटी हुनेजस्ता लक्षण देखा पर्छ।
“कसैको आज्ञा मान्न तिमीहरूले आफूलाई उसको दासको रूपमा सुम्पिरहन्छौ भने तिमीहरू उसैको दास हुन्छौ।”—रोमी ६:१६.
सुर्तीजन्य पदार्थको दासत्वमा परेर के तपाईं ईश्वरप्रति आज्ञाकारी हुन सक्नुहुन्छ र?
बाइबलले धूम्रपानप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण सच्याउन मदत गर्छ। रोमी ६:१६ यसो भन्छ: “के तिमीहरूलाई थाह छैन, कसैको आज्ञा मान्न तिमीहरूले आफूलाई उसको दासको रूपमा सुम्पिरहन्छौ भने तिमीहरू उसैको दास हुन्छौ किनभने तिमीहरू उसको आज्ञा मान्छौ?” यदि सुर्तीजन्य पदार्थको तलतलले कसैको सोचाइ अनि कामलाई वशमा पारेको छ भने ऊ घिनलाग्दो कामकुराको दास बन्छ। तर हाम्रो सृष्टिकर्ता जसको नाम यहोवा हो, उहाँ हाम्रो शरीरलाई हानि पुऱ्याउने कुरादेखि मात्र होइन, मनलाई अशुद्ध पार्ने सबै कुरादेखि पनि हामी अलग रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। (भजन ८३:१८, पवित्र बाइबल[TBS]; २ कोरिन्थी ७:१) जब कुनै व्यक्तिले यहोवाप्रति कृतज्ञता र आदर बढाउँदै लैजान्छ, तब उसले यहोवा हाम्रो सर्वोत्तम सेवा पाउन योग्य हुनुहुन्छ भनेर बुझ्छ। अनि सुर्तीजन्य पदार्थको दास बनेर ईश्वरलाई उत्तम सेवा चढाउन सकिंदैन भनेर पनि बुझ्छ। यस्तो बुझाइले उक्त व्यक्तिलाई कुइच्छाको प्रतिरोध गर्ने आत्मबल दिन्छ।
जर्मनीका ओलाफले १२ वर्षको उमेरदेखि चुरोट खान थालेका थिए। त्यसको १६ वर्षपछि तिनी कुलत त्याग्न सफल भए। तिनलाई चुरोट हानिकारक लाग्दैनथ्यो। तर समय बित्दै जाँदा चुरोटविना बाँच्नै नसक्ने भए। तिनी भन्छन्‌: “एक दिनको कुरा हो, मसँग एउटै चुरोट थिएन। म यति छटपटाएँ, त्यसको सुरमा मैले एस्ट्रेमा भएको जम्मै धुलो सोरसार पारें अनि सुर्ती जति एक ठाउँमा जम्मा गरेर अखबारको टुक्रामा बेरें। पछि मेलै महसुस गरें, यो कति लाजमर्दो कुरा थियो।” तिनले यस्तो घिनलाग्दो बानी कसरी त्यागे? तिनले भने: “चुरोट छोड्न सक्नुको मुख्य कारण यहोवालाई खुसी बनाउने मेरो इच्छा नै हो। साथै मानिसजातिप्रति यहोवाको प्रेम र उहाँले दिनुभएको आशाले पनि मलाई यो कुलत चटक्कै छोड्ने बल दियो।”
धूम्रपानले शरीरलाई हानि पुऱ्याउँछ
सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी एउटा किताब यसो भन्छ: “चुरोटले . . . मानव शरीरको लगभग सम्पूर्ण अङ्गलाई हानि पुऱ्याउँछ र रोगबिमार अनि मृत्युदर बढाउँछ भनेर वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि भइसकेको छ।” धेरैलाई थाह छ, धूम्रपानले क्यान्सर, मुटु र फोक्सोसम्बन्धी रोग निम्त्याउँछ। तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनअनुसार क्षयरोगजस्तो सरुवा रोगबाट हुने मृत्युको मुख्य कारण धूम्रपान पनि हो।
ईश्वरले दिनुभएको शरीरलाई अशुद्ध बानीहरूले बिगार्दै हुनुहुन्छ भने के तपाईंले उहाँलाई माया र आदर गरिरहनुभएको हुनेछ र?
यहोवा परमेश्वरले आफ्नो वचन बाइबलमार्फत हामीलाई आफ्नो शरीर, जीवन र शारीरिक तथा मानसिक क्षमताप्रति सही दृष्टिकोण राख्न सिकाउनुहुन्छ। यसबारे उहाँको छोरा येशूले यसो भन्नुभयो: “तिमीले यहोवा तिम्रा परमेश्वरलाई आफ्नो सारा मनले, आफ्नो सारा ज्यानले र आफ्नो सारा दिमागले प्रेम गर्नू।” (मत्ती २२:३७) यसबाट स्पष्ट हुन्छ, हामीले सही तरिकामा जीवन बिताएको र त्यसको आदर गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यहोवा परमेश्वर र उहाँका प्रतिज्ञाहरूबारे सिक्दै जाँदा हामी उहाँलाई माया गर्न थाल्छौं र उहाँले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको सम्पूर्ण कुराको मोल गर्न थाल्छौं। त्यसपछि शरीरलाई हानि गर्ने कुनै पनि कुरादेखि आफूलाई अलगै राख्न हामी उत्प्रेरित हुन्छौं।
भारतका जयवन्त नाम गरेका डाक्टर ३८ वर्षसम्म धूम्रपानको कुलतमा फसे। तिनले भने: “मैले स्वास्थ्यसम्बन्धी पत्रिकाबाट धूम्रपानका खतराहरूबारे थाह पाएँ। धूम्रपान हानिकारक छ भनेर मलाई थाह थियो अनि म आफ्नो बिरामीहरूलाई पनि त्यस्तो कुलत छोड्न सल्लाह दिन्थें। मैले पाँच/छ पटक प्रयास गरेर पनि आफ्नो बानी सुधार्न सकिनँ।” तिनलाई कुन कुराले मदत गऱ्यो? तिनी भन्छन्‌: “बाइबलको कुरा सिकेर मैले धूम्रपान त्याग्न सकें। यहोवालाई खुसी पार्ने इच्छाले त्यस्तो कुलत चटक्कै छोड्न सकें।”
धूम्रपानले अरूलाई असर गर्छ
धूम्रपान गर्ने व्यक्तिले फालेको धुवाँ विषाक्त हुन्छ। यस्तो किसिमको धुवाँले क्यान्सर र अन्य रोगहरू लाग्न सक्छ। यस्तो धुवाँले हरेक वर्ष ६,००,००० मानिसको ज्यान लिन्छ। यसमा धेरैजसो महिला र केटाकेटी पर्छन्‌। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन यस्तो चेतावनी दिन्छ: “चुरोट खाने व्यक्तिले फालेको धुवाँको मात्रा थोरै छ भन्दैमा त्यसले स्वास्थ्यमा असर गर्दैन भन्न सकिंदैन।”
“तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नू।”—मत्ती २२:३९.
तपाईंले फालेको चुरोटको धुवाँले छिमेकी र परिवारलाई हानि पुऱ्याइरहेको छ भने के तपाईंले उनीहरूलाई प्रेम गरिरहनुभएको हुनेछ र?
यहोवा परमेश्वरपछि हामीले अरू कसलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्नेबारे येशूले यसो भन्नुभयो: “तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नू।” (मत्ती २२:३९) यदि हामीले आफ्नो छिमेकी—परिवार, आफन्त, साथीभाइलाई हानि पुऱ्याउने बानी त्याग्दैनौं भने के हामीले तिनीहरूलाई प्रेम गरिरहेका हुन्छौं र? छिमेकीप्रतिको साँचो प्रेमले बाइबलको यो सल्लाह पालन गर्न हामीलाई उत्प्रेरित गर्छ: “हरेकले आफ्नो होइन तर अर्को मानिसको फाइदा खोज्ने गरोस्।”—१ कोरिन्थी १०:२४.
आर्मेनियामा बस्ने आर्मेन यसो भन्छन्‌: “मेरो चुरोट खाने बानीले परिवारलाई एकदमै असर गरिरहेको थियो। त्यसैले उहाँहरूले मलाई चुरोट छोड्न रोइकराइ गर्नुभयो। चुरोटले उहाँहरूलाई असर गर्छ भन्ने कुरा मैले स्वीकार्नै चाहिनँ।” आफ्नो सोचाइ कसरी परिवर्तन भयो भनेर तिनी आफै यसो भन्छन्‌: “बाइबलको ज्ञान र यहोवाप्रतिको प्रेमले चुरोट छोड्न मदत गऱ्यो। अनि यसले मलाई मात्र होइन, अरूलाई पनि हानि पुऱ्याउँछ भनेर स्वीकार्न मदत दियो।”
बाइबलको ज्ञानले ओलाफ, जयवन्त र आर्मेनलाई आफूलाई र अरूलाई असर गरिरहेको घिनलाग्दो बानी त्याग्न मदत गऱ्यो। धूम्रपान हानिकारक छ भन्ने थाह पाएर मात्र तिनीहरूले यो कुलत त्याग्न सकेका होइनन्‌। बरु यहोवालाई प्रेम गर्न थालेकोले र उहाँलाई खुसी पार्ने इच्छा भएकोले त्याग्न सफल भएका हुन्‌। प्रेमको महत्त्वपूर्ण भूमिकाबारे १ यूहन्ना ५:३ मा यसरी जोड दिइएको छ: “परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्नु नै उहाँलाई प्रेम गर्नु हो र उहाँका आज्ञाहरू बोझिला छैनन्‌।” हुन त बाइबलको सिद्धान्तअनुरूप चल्न सधैं सजिलो हुँदैन। तर परमेश्वरप्रतिको हाम्रो प्रेम गहिरो छ भने उहाँका आज्ञाहरू बोझिलो लाग्नेछैन।
विश्वव्यापी शिक्षण अभियानद्वारा यहोवा परमेश्वर लाखौं मानिसलाई सुर्तीजन्य पदार्थको दासत्वबाट मुक्त हुन मदत गर्दै हुनुहुन्छ। (१ तिमोथी २:३, ४) लाखौं मानिसलाई कुलतको सिकार बनाउने लोभी व्यापार जगत्‌लाई उहाँले छिट्टै नाश गर्नुहुनेछ। उहाँले यो काम स्वर्गमा रहेको राज्यको राजा येशूमार्फत गर्नुहुनेछ। यहोवाले धूम्रपानको महामारीलाई सधैंको लागि अन्त गर्नुहुनेछ र आज्ञाकारी मानिसहरूलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा त्रुटिरहित बनाउनुहुनेछ।—यशैया ३३:२४; प्रकाश १९:११, १५.
यदि तपाईं धूम्रपान छोड्न सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने हार नमान्नुहोस्। यहोवालाई प्रेम गर्न र धूम्रपानप्रति उहाँको जस्तै दृष्टिकोण राख्न सिकेर तपाईं पनि कुलत छोड्न सक्नुहुन्छ। यहोवाका साक्षीहरू तपाईंलाई भेटेर बाइबलको सिद्धान्त बुझ्न र त्यसअनुरूप चल्नको लागि मदत गर्न इच्छुक छन्‌। सुर्तीजन्य पदार्थको लत छोड्न चाहनुहुन्छ भने यहोवाले तपाईंलाई आवश्यक बल दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुहोस्।—फिलिप्पी ४:१३.
^ अनु.3धूम्रपानले चुरोट, बिंडी, सिगार, पाइप, हुक्काजस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सीधै तान्नुलाई बुझाउँछ। तर यस लेखमा उल्लेख गरिएका बाइबल सिद्धान्तहरू सुर्ती, खैनी, निकोटिन भएको इलेक्ट्रोनिक चुरोट र अन्य पदार्थ सेवन गर्ने सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ।
जून २०१४ | धूम्रपानप्रति ईश्वरको दृष्टिकोण
प्रहरीधरहरा जून २०१४ | धूम्रपानप्रति ईश्वरको दृष्टिकोण